Ihowuliseyili yesikwere / iRectangular Paper Bowl Menzi kunye noMboneleli |Ikamva
Isikwele / isitya sePhepha esixande
Uluhlu lwethu lwe-Wider square square paper bowl range lugqibelele kubathengisi bokutya njengoko bafanelekele ukutya okushushu kunye nokubandayo.Ezi zitya ziyakwazi ukuvuthwa, zihlaziywa ngokutsha kunye ne-biodegradable, ezenza zibe zilungele iimpawu zokusingqongileyo ezifuna ukunciphisa i-carbon footprint.Izivalo zithengiswa ngokwahlukeneyo.
IKAMVAisitya sephepha lesikwereenziwe ngephepha elithathwe kumasimi alawulwayo kwaye aqatywe nge-Ingeo bioplastic, hayi iplastiki.Yethuisitya sephephas ziqinisekiswa ukuba ziyavundiswa ngokorhwebo.Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye noluhlu lweenketho zokuvuza-ubungqina besiciko.
Ifumaneka kuluhlu lwemigangatho yomgangatho weshishini, izitya zephepha zesikwere zinokuprintwa ngokwezifiso ukukhuthaza uphawu lwakho.Isitokhwe kunye nokhetho lwesivalo sesiko luyafumaneka kubo bonke ubungakanani.
Esi sitya sephepha esisikwere senziwe ngokutsha ngodonga oluqinileyo, ulwakhiwo lwesitya sokongeza amandla sigcina ukutya kushushu kwaye izandla zikhululekile.
Isitya sePhepha esixande
RPB16 16oz(500ml) isitya sePhepha esixande 172*117*42mm 400pcs
RPB24 24oz(750ml) isitya sePhepha esixande 172*117*57mm 400pcs
RPB32 32oz(1000ml) isitya sePhepha esixande 172*117*78mm 400pcs
Isitya sePhepha lesikwere
SPB20 20oz(600ml) Isitya sePhepha lesikwere 170*170*48mm 400pcs
SPB30 30oz(900ml) Isitya sePhepha lesikwere 170*170*60mm 400pcs
SPB40 40oz(1200ml) Isitya sePhepha lesikwere 120*120*67mm 400pcs
· Iyilwe ngokwemilo yesikwere ukwahlula kokhuphisana nabo
· I-assortment yazo zonke izihlandlo ukusuka kwisidlo sakusasa kunye nesasemini ukuya kwisidlo sangokuhlwa kunye nokuhanjiswa.
.Uluhlu lwezixhobo kunye nezithintelo ukuze zilungele zonke iimfuno zakho.
.Ubukhulu obahlukeneyo kunye nezimbo zokwandisa ukubonakala komxholo apho kuyimfuneko kwaye unikeze iziciko ezikhuselekileyo zokutya ekuhambeni kunye nokuhanjiswa.
.Uluhlu lweenketho zokulahla ukusuka kwi-recyclability ukuya kwi-compostability.
.Iinketho zoyilo lwesiko ukunyusa impembelelo yebhrendi.
.Tshatisa iinketho ezininzi zeziciko kwiimfuno ezahlukeneyo
.Ibhodi yephepha eyenziwe ngehlathi elilawulwa ngokuzinzileyo okanye i-bamboo engenamithi
.Ibakala lokutya liyahambelana
.Ishicilelwe nge-inki esekwe emanzini
·Ibhodi yePhepha eliMhlophe
Ngaphambili: CPLA Ice cream ice cream
Okulandelayo: Isivalo se-CPLA
IPhepha leSivalo seLid